Luyaqhanqalazelwa unyuko lwamaxabiso ka loliwe – Elitsha
1st June 2014 Elitsha reportersCape Town, Oorhulemente basemakhaya, Trial edition 2 0 Xhosa
Isikhulo sika loliwe sase Khayelitsha
Umbutho wasekuhlaneni iSobahlangula, nombutho wabasebenzi iCOSATU eNtshona-Koloni kwakunye neminye imibutho emele abantu abangathathi-ntweni baqhanqalazela unyuko lwamaxabiso lwamatikiti ka Metrorail.
Le mibutho ithe yabamba uqhanqalazo inyazelisa u Metrorail ukuba asijike isigqibo sokunyusa ixabiso lwamatikiti ka loliwe. Endwaneni yokunyusa amaxabiso, le mibutho ithi u PRASA (Passenger Rail and Agency of South Africa) makaphucule inkonzo zakhe. Unyuko lwamaxabiso luqale ngomhla wokuqala ku July. iSobahlangula ethi ingumbutho emele amahlwempu, ithi uninzi lwabantu abahlala e Khayelitsha abakwazi ukubhatala amaxabiso aphezulu amatikiti ka Metrorail, kwaye ukonyuka kwamaxabiso kwenza izinto nzima ebantwini abahluphekayo. Itikiti lwenqanaba lwesithathu olusuka e Khayelitsha lusiya e Kapa lonyuke ngesenti ezi yi 50, olwenqanaba lokuqala lonyuke nge 70c.
Ongunobhala we Sobahlangula u Mandisi Mrwebi uthi sebembhalele u PRASA bemcela ukuba kubekho ixabiso elingenyukiyo lwabo bangasebenziyo.
“ Uninzi lwabantu base Khayelitsha bahluphekile, kwaye uninzi alusebenzi, lonto ithetha ukuthi abazukwazi ukukhwela u loliwe ongoyena unamaxabiso afikelelekayo”. Utshilo u Mandisi.
“ Namaxabiso ale bhasi ka MyCiti ehamaba apha e Khayelitsha ngoku, awafikeleleki ebantwini. Umasipala no rhulumente basemva kokwenza imali qha. Uzakuhamba njani umntu ongaphangeliyo ngo MyCiti”.
Kwimbalelwano ethunyelwe kwi Elitsha ngu Metrorail bathi isinyanzeliso sika Cosatu neminye imibutho wokuba banyuse imali xa bephucule inkonzo zikaloliwe azivakali. Bathi ukuba abawanyusi amaxabiso kuzakuchaphazela inkampani nekuzisa inkonzo ebantwini.
Izantyala-ntyala zemvula zibashiye bengoding’ ezweni abahlali baseSiqalo
Izantyalantyala zemvula zibashiye bengo dingezweni abahlali base Siqalo